Izindlela eziyi-15 Zokukhulisa Uhlu Lakho Lokumaketha lwe-imeyili | Martech Zone
Izindlela eziyi-15 Zokukhulisa Uhlu Lakho Lokumaketha lwe-imeyili
NgoLwesihlanu, Okthoba 18, 2013 NgoLwesine, ngo-Okthoba 17, 2013 Douglas Karr
Ukukhula, ukukhula, ukukhula… wonke umuntu ubheke ukuthola abalandeli abasha, abalandeli abasha, izivakashi ezintsha, ezintsha .. ezintsha .. ezintsha. Kuthiwani ngezivakashi zakho ezikhona? Wenzani ukwenza ngcono ithuba lokubasondeza ekwenzeni ibhizinisi nawe? Sizenzele iphutha thina ngokwethu… sifuna ukusesha okungcono, ukukhushulwa ngokwengeziwe, ukuba khona kwabantu okwandayo. Imiphumela yayihlala izivakashi eziningi kusayithi kepha hhayi imali engenayo eningi ezansi nomfula. Ukwandisa uhlu lwakho lwe-imeyili kufanele kube isu eliyinhloko lecebo lakho online.
Eminyakeni embalwa edlule, ukugxila kwethu empeleni sekufulathele abalandeli nabalandeli futhi kwathuthela kwabanamadlozi - ikakhulukazi ukumaketha nge-imeyili. Uhlu lwethu luyaqhubeka nokukhula futhi luku- ababhalisile abahlonishwayo abangu-100,000. Kusithathe iminyaka eyishumi ukufika kulelo phuzu kepha, ngaphandle kokungabaza, kungukutshala imali okuhle kakhulu esake sakwenza. Lapho ngithumela i-imeyili, iba yimali eqondile kithi noma imikhombandlela eqondile ezinkampanini esixoxa ngazo. Muva nje, uShel Israel noRobert Scoble bangibonge ngesiqongo abasibonile ekuthengisweni kwabo kwezincwadi lapho iphephandaba lethu lamasonto onke liphuma.
@nomfundo_m Sibona ukuphakama kwezentengiso, uDoug. Thx kusuka @simphiwe futhi mina.
Ukwandisa uhlu lwakho lwe-imeyili kuhluke kakhulu ekungezeni abalandeli noma abalandeli. Ukuba nesivakashi ukukunikeza ukufinyelela okuqondile ebhokisini labo lokungenayo kuyisibonakaliso sokugcina sokuthembana. Kuyisikhwama okungafanele sihlukunyezwe, kepha nakanjani kufanele sinakekelwe. Uma usebenza kanzima ukuletha abantu kusayithi lakho futhi ungenayo indlela yokubhalisa, umane ushiye imali etafuleni lenkampani yakho. Lapho abantu bebuyela kusayithi lakho kaninginingi, bazobhalisa lapho becabanga ukuthi kunokubaluleka kokubhaliselwe.
Ukwandisa uhlu lwakho lwe-imeyili kudinga nokusebenza kanzima. Abahlinzeki bezinsizakalo ze-imeyili bayahlekisa ekusebenzelaneni nezinkampani ezikhulisa uhlu lwazo ngokushesha ngokwesaba ukulimaza ukuhanjiswa kwazo konke. Kade silwa nabathengisi abambalwa ngoba befuna ukunciphisa amandla ethu okungeza kuhlu lwethu. Bacabanga ukuthi ungumgaxekile lapho ungenisa ababhalisile abayizinkulungwane ezimbalwa - hhayi ukuthi umane nje wakhetha ukungena kwi-webinar oyengezayo.
Nayi imibono eminingi yokwakha uhlu nokugcinwa okuvela kuyo GetResponse lokho kuzokusiza ukuthi uthole imiphumela emihle kakhulu evela kuyo yonke imisebenzi yakho yokuthengisa ye-imeyili. I-GetResponse ine- Isaphulelo sempilo esingu-15% uma ubhalisa ngesixhumanisi sethu sokuxhumana. Banamakhulu ama-templates amahle kanye ne-rock solid interface elula ukuthi noma ngubani angayisebenzisa.
Nikeza Inani - Masonto onke, sabelana ngokuthunyelwe kwethu kwakamuva nomyalezo oyingqayizivele kubabhalisile. Kwesinye isikhathi kuyisaphulelo, kwesinye isikhathi izeluleko ezithile eziqinile izilaleli zethu ezingazisebenzisa. Inhloso yethu ukuthi wonke umuntu obhalisile uthola okuthile okuyigugu kuwo wonke ama-imeyili esiwathumelayo.
Amafomu Okubhaliselwe - Akukuhle, kepha ukwehla kwethu kusayithi lethu kusilethela ababhalisile abasha abangaphezu kuka-150 ngenyanga! Futhi sine- bhalisa ikhasi. Siphinde sahlola amafomu okuvela phakathi kwesikrini futhi saba nemiphumela emihle - kepha ngisesocingweni mayelana nokuphazamisa kangaka.
Ukubhaliswa Komphakathi - Faka ifomu lokubhalisa ekhasini lakho le-Facebook bese unikeza abalandeli bakho nabalandeli ithuba lokubhalisa njalo ngezikhathi ezithile. Sizama ukuyicindezela lapho cishe kanye ngenyanga.
Kwenze kube lula - Musa ukucela ithani lezinkambu… ikheli le-imeyili negama kuyisiqalo esihle. Lapho abantu bengena kokunye ukunikezwa ungacela imininingwane eyengeziwe. Ukubhaliswa kwakho kwe-imeyili akufani nomuntu ofuna ukwenza ibhizinisi nawe, bahlanganyela nje ngokujulile nawe. Ungabesabi!
Inqubomgomo yobumfihlo - Yazisa abafundi bakho ukuthi bangaqiniseka ukuthi ngeke wabelane ngolwazi lwabo nabanye. Indlela elula yokwenza lokhu ukusetha ikhasi lewebhu leNqubomgomo Yobumfihlo futhi unikeze isixhumanisi kulo ngezansi kwefomu lakho lokungena. Uma ungazi ukuthi ungabhala kanjani eyodwa, kukhona okuhle Abakhiqizi benqubomgomo yobumfihlo inthanethi.
Amasampula - Vumela abantu babone isibonelo sencwajana yakho! Sivame ukushicilela isixhumanisi sencwadi yethu yokugcina lapho sicindezela abantu ukuthi babhalise ngemithombo yezokuxhumana. Lapho bekubona, bayazi ukuthi balindeleni futhi bakhetha ukungena.
Archive - Ukuba nelabhulali eku-inthanethi yezincwadi zezindaba nezindatshana ezedlule kuyakhanga futhi kuyasebenziseka kubavakashi futhi kwakha ukuthembeka kwakho njengesiphathimandla. Ngaphezu kwalokho, uma izindatshana zakho zibhalwe ngamasu amahle we-SEO engqondweni, zingakhuphula ithrafikhi kuwebhusayithi yakho ngokubeka isikhundla senjini esetshenzisiwe.
Yiba Nomnikelo - Uma omunye wabaxhasi bethu enesaphulelo noma isipho, sizokusebenzisa lokho ukuheha abantu ukuthi bakhethe ukungena encwadini yethu yezindaba elandelayo ukusizakala ngokunikezwa. Ukunikeza lezi zinzuzo kuzogcina ababhalisile bakho bengenile nabo!
IZwi Lomlomo - nikeza isixhumanisi ku-imeyili yakho lapho ababhalisile bakho bengabelana ngencwadi yakho yezindaba nenethiwekhi yabo. Izwi lomlomo liyindlela enamandla yokwengeza ababhalisile!
Yabelana ngokuqukethwe kwakho - ukwabelana ngokuqukethwe kwakho nezinye izindawo kuyindlela enhle yokuheha izithameli zabo ohlwini lwakho lokuthengisa nge-imeyili. Abantu bahlala bebheka ukwabelana ngokuqukethwe okuhle - nikeza okwakho kude futhi ubanikeze nje isixhumanisi sokubhaliselwe lapho abantu bangabhalisela khona ngaphezulu!
Bhalisela - ukuba nenkinobho yokubhalisa akubalulekile nje kusayithi lakho, kubaluleke kakhulu ku-imeyili yakho njengoba idluliselwa kwabanye. Qiniseka ukuthi unenkinobho yokubhalisa kuwo wonke amaphephandaba aphumayo!
Guqula okuningi - Lapho abantu bebhalisa ekhasini lokufika, bengeze amazwana, noma bahlanganyele nawe noma kuphi kusayithi lakho, ingabe unikeza izindlela zokungena kuhlu lwakho lokuthengisa nge-imeyili? Kumele!
nobufakazi - Faka nobufakazi ekubhaliseni kwakho bese ucindezela amakhasi. Lokhu kubalulekile. Faka ubufakazi obubodwa noma obubili obuvela kumakhasimende anelisekile ekhasini lakho lokuminyanisa.Ukuze uthuthukise ukukholeka, thola imvume yokusebenzisa amagama wangempela wamakhasimende, izindawo kanye / noma ama-url (Ungasebenzisi i-'Bob K, FL ').
Ibhulogi ngokwenkolo - Ukubhloga kuyindlela enhle yokuxhumana namathemba namakhasimende angaba khona, futhi kwakha ukusebenzisana okuhle ngokukhangisa kwakho nge-imeyili. Qiniseka ukuthi ufaka ifomu lakho lokubhalisa lezindaba ekhasini ngalinye lebhulogi yakho.
Ithiphu enkulu kunazo zonke engu- # kube ngumenzi wethu omkhulu kunabo bonke. Sebenza nezinye izinhlangano ukuze nikeza ukubhalisa kwakho. Lapho sisebenza kwi-webinar neklayenti, sinikela ngokubhaliselwe ngesikhathi sokubhalisa. Lapho sikhuluma emcimbini, sinikeza abantu ithuba lokubhalisa ngqo kumaslayidi ethu. Siphinde sinikeze amandla okubhalela okubhalisile nge-SMS - kuyindlela enhle yokungenisa abantu!
Tags: ababhalisile nge-imeyilikhulisa ukumaketha kwe-imeyiliuhlu lokukhulakhulisa uhlu lwababhalisilekhulisa uhlu lwakho
Kungani Ukuthengiswa Kwevidiyo Kushayela Ukuthengisa
Izinganekwane Ezi-7 Zokumaketha Nge-imeyili
Ukuchaza Ukukhiqizwa kwamavidiyo
Jan 6, 2014 ku-3: 02 AM
ukumaketha nge-imeyili kungenye yezindlela zokwenza ukumaketha okuqondile nokuqoqa amathemba namakhasimende emhlabeni wonke. Kuyindlela ephumelelayo yokwandisa imakethe yakho
Feb 1, 2014 ngo-3: 30 PM
Siphinde sahlola amafomu okuvela phakathi kwesikrini futhi saba nawo
imiphumela emihle - kepha ngisesocingweni mayelana nokuphazamisa kangaka.